Daawo YouTube Videos noq-, in Motion gaabis ah iyo in dal kasta
Dadka waxay jecel yihiin inay daawadaan videos on YouTube. Laakiin mararka qaarkood, ay doonayaan hawlaha dheeraad ah sida ku cel-ciyaareed YouTube iyo dhaqaaq tartiib ah. Intaa waxaa dheer, waxaa u roon in haddii ay ka oo dhan ka heli kartaa YouTube dunida.
Ku celi ciyaaro YouTube Watch YouTube in dal kasta (tubada YouTube)
Sida loo Play YouTube noq-
Waa in aadan ka xishoon inaad qirto in aad isku dayday in ay ku soo celiyaan video YouTube ah waqtiyo gol leeyahay in lagu Daawasho jeer aan la koobi karayn. Gujinaya badhamada Youtube tiro dhowr jeer ah u muuqataa infuriating halka YouTube ayaa si kasta oo dabiici ah ama aadanaha-saaxiibtinimo ay ku soo celiyaan video geeyo ma bixiyo. Waxaad xaqiiqo ah u baahan tahay in ay ku soo celiyaan videos marka la isku dayayo in ay bartaan wax u dhegeysto aad song jecel. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha weyn oo u oggolaan inaad dib u fadhiiso oo wuxuu ku raaxaysan aad video si joogta ah.
Xalka 1: Edit URL video YouTube in bar cinwaanka
Solution 2: Iyadoo loo marayo adeeg online
Xalka 3: Iyadoo dajinta iyo ciyaaro ciyaaryahanka desktop ah
Sida la og yahay in dhan, YouTube ma oggolaan daawadayaasha ay ku soo celiyaan ay jecel YouTube videos, waxaa jira adeegyo loo sugay in laguu ogolaado in aad in sidaas la sameeyo. Just raac tallaabooyinka hoos ku siiyey iyo ciyaaro video inta ugu badan ee aad rabto.
1. Si fudud u raadiyaan video aad jeceshahay in ay wax ka bedel ay URL in bar cinwaanka. Halkan waxaa ku qoran tusaale ah URL ka video YouTube: www.youtube.com/watch?v=hbhvCYn7CJE
2. masixi wax walba hore ee youtube, waa www ..
3. Hadda qor 'celis ka dib markii youtube inay ka sameeyaan sida youtuberepeat.com/watch?v=hbhvCYn7CJE this. Markaas riix gala .
4. Hadda, waxaa laguu soo wareejiyey doonaa in link ah in ay ku soo celiyaan doonaa videos iyo joojin doonaa oo kaliya markii aad xirto doonaa bogga. Boggan waxaa qoreysa counter celiyaan in kuu ogolaanayaa inaad ogaato tirada inta jeer ee aad soo noqnoqda video ah.
Xalka 2: Iyadoo loo marayo adeeg online
Adeegyada Online sidoo kale ka shaqeyn wanaagsan ee ah in la sameeyo si ay u soo celiyaan aad videos. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa raacaa talaabooyinka hoos ku xusan.
1. Fur adeegga internetka loo siiyaa biraawsarkaaga. Waxaa jira tiro ka mid ah website-yada in ay bixiyaan adeeg ku celiyaan YouTube aan ku amraya haba yaratee hal sidan oo kale: www.yourepeat.com.
2. dhaji link ah ee video aad jeceshahay galay bar raadinta. Waxaad paste karaa link soo galeen bar raadinta ama raadiyo videos isticmaalaya bar raadinta webpage ku saabsan.
3. Start ciyaaro YouTube si joogta ah. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in ay doortaan muddo waqti ah ee soo noqnoqda, ciyaaro ka dibna iska raaxayso.
Tani waxay xal u noqon doonaan weyn haddii aad rabto in aad videos for offline loo maqli karo marka aanad haysan internet. Aan aragno waxa downloader YouTube aad halkan ka heli kartaa inay idinka caawiyaan.
Barnaamijka aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo YouTube-Wondershare AllMyTube for Mac
1. Download videos ka YouTube in hab fudud oo degdeg ah
2. Dufcaddii download playlists YouTube si fudud
3. U beddelaan videos in qaab kasta oo aad ka fekeri karo
4. Taageerada si joogta ah ay ciyaaryahan dhisay-in ciyaaro video
Sida loo isticmaalo Wondershare AllMyTube inaad kala soo baxdo iyo ciyaaro YouTube videos
Tallaabada 1. Ku rakib this downloader YouTube
Download barnaamijkan si loo soo dajiyo on your computer. Waxaa fur si aad u hesho diyaar.
Tallaabada 2. Download YouTube videos in 3 siyaabood ee Mac
Waxaad scour kartaa ama aad dhirtuba video jecel u download. Marka aad la ciyaareyso videos ah, waxaa ka muuqan doona a Download button on margin ugu korraysa, oo aad video. Hadda, waxaad kala socon kartaa mid ka mid ah saddex siyaabood oo kala soo bixi video YouTube ah.
1). Riix Download button iyo dar video in ay liiska download
2). Copy URL iyo guji URL paste ku saabsan barnaamijka
3). Habka saddexaad waa in la jiidayo URL video iyo hoos barnaamijka
Tallaabada 3. ciyaaro celi youtube videos
Waxaa la dhisay-in video ciyaaryahan ee downloader bilaash ah kuu ogolaanaysaa inaad daawato videos si fudud inta ugu badan ee aad rabto. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa kaliya labo gool guji video ama u muujiyo iyo markaas, riix spacebar ay u bilaabaan loo maqli ah.
Sida loo tubada YouTube inay dhigo qaar ay heli dal kasta
By siinaysa fursad ah si ay isgaadhsiin iyo wadaagaan fikrado, YouTube caddaynaysaa in la balli macluumaadka iyo aqoonta maanta. Youtube sii wadaan in ay qarxin macluumaad iyada oo videos, laakiin wali waxaa jira waddamada YouTube aan la heli karin u geeyo. Tani waxaa laga yaabaa taasoo ah goobaha milkiilayaasha video 'ee samaynta videos la heli karo oo kaliya in dalalka qaar copyright xadiday. Taasi waa sababta dadka isticmaala leeyihiin in dalabka ah in tubada YouTube markii fariin soo socda u muuqataa: videos Tani ma laga heli karo dalka.
Xalka 1: Adeegso web wakiil
Solution 2: Ku dar "ss" horteeda youtube.com
Solution 2: beddel / daawado v = leh / v / video youtube in ay url?
Xalka 1: Isticmaal wakiil internetka ah
Wakiil Web A waxaa sida caadiga ah ku shaqeeya by codsiyada server-ka dhisan. Mudaba ku noocan oo kale ah ka shaqeeyaan iyada oo loo marayo browser internetka ah, sida ProxTube . Iyada oo ujeedadu tahay in qarinaya Ciwaanka IP: ga iyo ka eegay si qarsoodi ah, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waxaa kaliya booqo bogga hore ee adeegga ee web browser oo gali cinwaanka internetka ama URL foomka la siiyey.
Isticmaalka adeega internetka wakiil ah, waxaad ka heli kartaa hab agagaarka filtarrada internetka ee hay'adaha dawladda, dugsiga, iyo shaqeeyaan ama wadan xakamaynta waxaa ay ku soo rogeen via bixiyaha adeegga Internet ama ISP. Web wakiil gelineya inaad tubada Youtube ku fudayd.
Qaar ka mid ah goobaha wakiil web ugu caansan waxaa ka mid ah proxy.org, hidemyass.com iyo unblockyoutube.us. Kale oo ka browser internetka, software mar dambe ma loo baahan yahay in la isticmaalo wakiil browser-ku-saleysan. Mudaba ku noocan oo kale ah ka shaqeeyaa ay hesho URL in macmiilka ah waxaa ay beegsanayaan sida youtube.com, codsanaya URL ah oo lagu taageerayo macmiil oo ku soo laabtay content codsaday in macmiilku dib.
Xalka 2: Ku dar "ss" horteeda youtube.com
Si kale oo weyn oo ay ku tubada YouTube waa in lagu daro 'ss' ka hor 'youtube' in URL ee video gaar ah. Tani waxay awood u siin doona waxaad kala soo bixi video oo u ciyaaro inta ugu badan ee aad awoodo. Waxaad isticmaali kartaa hab fudud si aad u aragto youtube videos dalalka ama hay'adaha halkaas oo la hor istaagay.
Xalka 3: beddel / daawado v = leh / v / video youtube in ay url?
Guud ahaan, waa wax aan macquul aheyn si aad u daawato videos in wadamada ay xayiraad juquraafi ahaaneed ee Youtube waxaa bypassed. Sida natiijada, mar kasta oo aad isku daydo wax kasta oo daawanaya video on Youtube, farriin u muuqda oo muujinaysa in video ma laga heli karo dalka. Xaaladda noocaas ah, waxaad bedeli kartaa '/ daawado? V =' la '/ v /' ee URL video on Youtube ka.
> Resource > YouTube > Dhamaan Talooyin in aad u baahan tahay Daawashada YouTube Videos